Sala kakuhle kuJuan Marsé. Ukuphononongwa kowona msebenzi wakhe ubalaseleyo | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Ababhali, Iincwadi, Izaziso, Inoveli
Siye savalelisana noJuan Marsé. Wayeneminyaka engama-87 ubudala kwaye wayengomnye wababalisi ababaluleke kakhulu kuncwadi lwangoku kweli lizwe. Ukusuka Barcelona, isukile apho nayo. Shiya ilifa elipheleleyo izihloko ezingalibalekiyo njengaye Emva kwemini kunye noTeresa, ukuba bakuxelele ukuba ndiwile okanye i-Spell spell, ukongeza kumanqaku, amabali kunye neminye imisebenzi. Ophumelele Imbasa yePlanethi kunye ingawenzi, Igama lakhe linxulunyaniswa nelona bali libalaseleyo. Oku yi uphononongo emsebenzini wakhe.
1 Ukutshixwa ngethoyi enye (1960)
2 Emva kwemini kunye noTeresa (1966)
3 Ukuba bakuxelela ukuba ndiwile (ngo-1973)
4 Intombazana kwiPanties yegolide (1978)
5 Ngenye imini ndiza kubuya (1982)
6 Umthandi woLwimi-mbini (1990)
7 Ukutshutshiswa kweShanghai (1993)
8 Imisila yeLizard (2000)
Uzivalele phezulu ngento yokudlala enye (1960)
Inoveli yokuqala NguJuan Marsé iseti yabalinganiswa abaninzi, imixholo kunye noseto oluphindaphindiweyo kuwo wonke umsebenzi wakhe wexesha elizayo. Ibalisa ibali labantu abancinci abakumgangatho ophakathi, abantwana beentsapho ezichaphazeleka yimfazwe yamakhaya.
Emva kwemini kunye noTeresa (1966)
Kwakunjalo Imbali emfutshane yeThala leeNcwadi kananjalo neyakhe Impumelelo eyaziwayo nakwamanye amazwe. Ngabalinganiswa abahlukileyo njengaleyo Pijoaparte, Umzekelo oqhelekileyo weeklasi ezisezantsi nezingacalucalulo ezifuna udumo ekuhlaleni, kunye Teresa, intombazana entle, umfundi kunye nosapho oluhle lweCatalan high bourgeoisie.
Yaba yinto Ukulungiswa kwefilimu en 1984 yi nxalenye UGonzalo herralde, osayina iskripthi kunye nesakhe UJuan Marsé. Kwaye ndafaka i-bluebells nge UMaribel Martín, uEngel Alcázar, UCristina Marsillach, Mónica Randall okanye u-Alberto Closas phakathi kwabanye abaninzi.
Ukuba bakuxelele ukuba ndiwile (1973)
Esinye isihloko esisisiseko kwincwadi kaMarsé. Uyibhale phaya emva kweminyaka yamashumi amathandathu kwaye kwaba njalo kuthintelwe ngokunyanzelwa, Ngomfanekiso wakhe wobomi ngexesha lolawulo lukaFranco. Ikwayenye yeenoveli zakhe zobuqu.
Intombazana enee-panties zegolide (1978)
Umlinganiswa ophambili yiLuys Forest, umbhali wakudala we-Falangist, ongumhlolokazi kunye nodumo oluncitshisiweyo loncwadi, obhala iimemori zakhe, azibeke endaweni yakhe ngokulula nangeyona ndlela yothando inokwenzeka. I-counterpoint ibekwa ngumtshana wakhe uMariana -intombazana eneepanty zegolide-, emlumkisa ngeziphumo zokufuna ukubuyisa ixesha lakhe elidlulileyo. Ophumelele Imbasa yePlanethi, ibiyi isiwe kwiimuvi ngo-1979 ngu UVicente Aranda kwaye yafaka uVictoria Abril.
Ngenye imini ndiza kubuya (1982)
UJan Julivert Monn Wayengumgulukudu kwaye umphangi Iibhanki ngexesha lokuqala kwasemva kwemfazwe. Xa eshiya intolongo, phambi kokuba wonke umntu alindele ukubona ukuba iza kuba njani kwaye yintoni impindezelo yakhe, nangona kunjalo, ubuyela ekhaya naleyo ukuziphindezela ilibalekile kunye nenjongo kuphela yokwakha kwakhona ubomi esele igqalwa njengenkcitho.
Umthandi weelwimi ezimbini (1990)
UJuan Marés ungumphuphi ozenzileyo, umfazi wakhe uyamkhohlisa amshiye nangona ethandana ngokupheleleyo. Ukudinwa Ukuphelelwa lithemba kunye nokuhlutha, uyagxothwa ohambahamba ematyotyombeni aseBarcelona ade eze nesicwangciso: zenze charnego ubize uFaneca ukuba abuyisele umfazi wakhe wangaphambili.
UVicente Aranda waphinda ophethe eyakhe ukulungelelaniswa kwefilimu en 1993 eyadlala u-Imanol Arias kunye no-Ornella Mutti phakathi kwabanye.
Upelo lweShanghai (1993)
SikwiBarcelona ye 1984, kunye nomphathi Blay usalila ngenxa yemfazwe elahlekileyo kwaye noonyana bakhe babulawa apho. Ngaye uhamba UDaniel omncinci kwaye kunye bayahamba phakathi kwabalinganiswa abanjengo Chacón bazalwana, olinda isango lendlu ahlala kuyo Susana, intombazana egulayo, intombi ka anita kunye kim, inguquko. Kuza umhlobo kunye nohambo oluhamba noKim, Iforamu, Ngubani oza kubalisa abantwana isenzo sodelo-ngozi ukuba utata wentombazana wayenayo Shanghai, ejongene namaNazi, amadoda angenalusini angenabundlobongela kunye nabafazi ababulalayo.
UFernando Trueba utyikitye eyakhe Inguqulelo yefilimu ngo-2002 badlala iinkwenkwezi UAriadna Gil, UFernando Fernan Gomez, Jorge Sanz okanye URosa María Sardà.
Imisila yeLizard (2000)
Kwakhona sinolutsha olucingayo njenge-protagonist, UDavid nenja yakhe uSpark. Bona, kunye noMhloli odumileyo uGalván, okanye uRosa Bartra, intloko ebomvu ebomvu ekhulelweyo, baphinde babhala Abalinganiswa abangenakulibaleka Kwibali elinamaphupha amaninzi kunye neziporho ezichaphazelekayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Izaziso » Sala kakuhle kuJuan Marsé. Ukuphononongwa kowona msebenzi wakhe ubalaseleyo